Nepali Tech Blog – Page2– Just another nepali tech blog
।। नेपाली टेक ब्लगमा तपाईलाई स्वागत छ ।।
हाम्रो फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोला
डोमेन रजिस्ट्रेसन, होस्टिङ तथा वर्डप्रेसमा वेबसाइट निर्माणका लागि ganess86@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ ।
In: प्रविधि खबर|Last Updated: September 1, 2015
कुनै कुराको एलर्जी भएपछि त्यो कुराबाट बच्न के गर्नु पर्छ ? पक्कै पनि जुन वस्तुको एलर्जी भएको हो, त्योदेखि टाढा हुनु पर्छ । सकेसम्म त्यो वस्तुको सम्पर्कमा नजाने वा सम्पर्कमा आउँन नदिने । तर आँखाले देख्दै नदेखिने र आधुनिक समाजका लागि अत्यावश्यक वाइफाइकै एलर्जी भयो भने ? सकेसम्म सहने । सहन नसक्ने भयो भने झोलीतुम्बा… (0 comment)
बजेट ०७२/०७३ मा सूचना प्रबिधि
In: प्रविधि खबर|Last Updated: July 15, 2015
पुर्वाग्रही हुनु राम्रो होइन तर विगतलाई नहेरी वर्तमानलाई मुल्याकंन गर्ने निरपेक्ष विधि थाहा छैन । यसपाली पेश भएको बजेटको मुल्याकंनमा पनि यो लागू भयो । कांग्रेस र एमालेको सरकार छ । र, अर्थमन्त्री छन् रामशरण महत । नेपालमा सबैभन्दा बढि पटक बजेट पेश गर्न पाउँने भाग्यमानी यीनै हुन् । यो पटकसम्म ८ पटक भइसक्यो यीनले… (0 comment)